Yakasarudzika sosi bhegi bhegi ...
Customized katsi uswa bhegi CA ...
Mashandisiro anoita firimu rangu mupumburu pac ...
Yakagadzirira kutumira zvese saizi inogona ...
Customized simuka simuka ...
Tsika yemwana kurwisa inotsvedza zipi cannabis bhegi
Slider zipper mwana kuramba bhegi anotaridzika akanaka kwazvo, uye hunyanzvi. Kungoitira kuti titore ichi chinotsvedza bhegi, tinoda kuodha yakakosha zipi, uye tinodawo kuisa chinotsvedza muhombodo nemaoko. Izvo zvinoda nguva yakawanda nemari. Asi zvinonyanya kukosha izvozvo.
Yakagadzirira kutumira ese saizi cannabis bhegi
Isu tinonyanya kuita basa reOEM, zvinoreva kuti tichaburitsa mabhegi zvinoenderana neyako bhegi mhando, saizi, zvinhu, ukobvu, kudhinda uye huwandu. Nepo ikozvino paine zvidikanwi hombe pane zvakagadzirira kutumira mabhegi, ipapo tinosangana nemusika, uye isu tinoedza zvatinogona kuti tigadzire akanakisa magadziriso uye mhando yako.
Tsika yakadhindwa yemwana kudzvinyirira pini N yakatsiga bhegi
Isu takaita akawanda akasiyana masize epiniki mabhegi, mamwe mabhegi madiki, vanhu vanoisa zvigadzirwa zvavo mukati maro. Nepo vamwe vatengi vachifarira kugadzira hombe yepiniki bhegi, senge 9 `` X12 '', sebhegi rekutenga. Vachaisa bhegi iri muchitoro, kana paine mutengi anotora mamwe mabhegi madiki akasiyana, vanoisa mabhegi madiki mudiki muhomwe hombe yekutenga, voisimbisa sezvinodiwa nehurumende.
Kaviri zipi yemwana kuramba cannabis bhegi
Double zipi imhando yezipi yakakosha inogona kudzivirira vana kubva muchigadzirwa mukati memabhegi, kune yakavhurika yekunyepedzera kumashure kwemabhegi, kana iwe uchida kuvhura mabhegi, zvinoda kuti iwe udhonze iyo yekumberi dara uye yekumashure dura panguva imwe chete. , zvikasadaro hazvigone kuvhurwa.Iyo inozivikanwa kwazvo mumasaga e cannabis.
Yakasarudzika simuka resealable cannabis bhegi
Simuka zipi bhegi ndiyo inonyanya kushandiswa bhegi mhando yekurongedza kannabis, zvisinei maruva akaomeswa kana kofi, shuga, makuki anowedzera neCBD kana THC. Vazhinji vatengi vanoda glossy nzvimbo ine hwindo, zvakare ikozvino unoona UV kudhinda iri mutsva maitiro.
China Wholesale cannabis saga bhegi
Kune cannabis, senge kune maruva akaomeswa, kazhinji vanhu vanosarudza simuka mabhegi cos inoda nzvimbo yakakura. Ipo kune mamwe macapuleti, madiki masaga mabhegi ichave sarudzo iri nani. Tinogona kuita idiki diki 4 * 5cm bhegi, nepo saizi yakajairika iri 5 * 12cm, seCarttel bhegi pazasi. Zvakare kunyangwe kune madiki mabhegi e cannabis, unogona kuita mat, kupenya kana UV, uine foil kana isina, ine hwindo, zipi, nezvimwe.